Kedu ihe bụ ITIL? Kedu ihe bụ uru nke akwụkwọ ikikere ITIL? | Ọ BỤ
ITIL Asambodo Isi na Ebe E Si Nweta
Nyocha nke akwụkwọ ITIL
Akwụ ụgwọ akwụkwọ ITIL
Kedu uru nke akwụkwọ ikikere ITIL®?
Uru maka ndi mmadu
Uru maka Nhazi
ITIL (Ụlọ ọrụ Njikọ Akụrụngwa) ezubere maka mmezi nke ọrụ nlekọta IT niile na arụmọrụ ya ndị metụtara ya, dịka ọmụmaatụ, nhọrọ, atụmatụ, mmepụta, nnyefe, nkwado, na nyocha. MGAA kwe ka nchịkọta nke data, nyocha ya na nkọwa ya, site n'ịgbaso usoro ịdabere na ịdabere iji nweta ma nyochaa ha. Ọ bụ ụwa na-ejikarị ejikarị ọrụ nlekọta ọrụ nlekọta IT iji rụzuo ọrụ ọrụ na-adịghị agwụ agwụ ma welie arụpụta ihe.
Dika ihe omuma data na-emeputawanye, o na-abia ihe di nkpa nke ahia iji kwado ya ma kwadebe ndi okachamara n'ile ihe ntinye data, na nyocha. Ọ bụ ebe a Iwu ITILs na-agbanye n'ime usoro iwu maka ndị ọkachamara sitere n'ike mmụọ na ịmepụta onwe ha dị ka ndị nchọpụta data ma ọ bụ ndị ọkachamara data. Ịga akwụkwọ nyocha nke ITIL na-egosi na ị nwere ike itinye akwụkwọ mmụta ITIL n'ọrụ ya na òtù ọrụ nlekọta ya, na-aṅachaghị ntị n'olu ha.
Nkwenye ahụ bụ ule 3 nke nwere ọkwa anọ nke nzere ntozu:
1.ITIL Foundation nke na-adabere na nkọwa na nkwado nke nkwado ITIL na nnyefe ọrụ (2 Ebe E Si Nweta),
2. ITIL N'etiti ọkwa nwere ọtụtụ modules ọzụzụ nhọrọ, nke ị nwere ike ịchọta modulu abụọ, idebe usoro ndụ cycle iwu na otu nchịkọta mmezi (15 Ebe E Si Nweta),
3.Nyocha ọkwa ITIL lelee ihe omumu na ihe omuma nke achotara ITIL (22 credits) na
4.Ọkwa ọkwa ITIL gụnyere atụmatụ, njikwa na arụmọrụ na njikwa ọrụ ọrụ niile nke pragmatic (Enweghị ihe mgbakwunye ọzọ ma ọbụghị ihe na-erughị afọ 5 nke ọrụ IT ngalaba).
* A na-etinye ụgwọ ndị ahụ na ọkwa ọ bụla. N'ụzọ dị otú a, ihe ndị gara aga na-ebuwanye ibu na ọkwa ọzọ.
Ndị na-eri Ihe omume ITIL dị iche iche maka ọkwa dị iche iche na ụlọ ọrụ. Ọ na-adaberekwa na ọtụtụ ụbọchị nke mmemme nkwadebe. Site na nnukwu, ọnụahịa dị n'etiti US $ 200 na US $ 1000, nke dị iche na oge nkwadebe mmemme ahụ. Okwu nke usoro ITIL bụ 2 ka ụbọchị 7.
Ị ga-enweta ndenye ọpụpụ iji nweta ebe a: - Akwụkwọ ndị dị elu iji gụọ Iji nweta akwụkwọ ikikere ITIL
N'ebe a bụ ndị a na-atụ anya ka a na-akwụ ụgwọ maka ọkwa ọ bụla, ma cheta na ọ nwere ike ịgbanwe site na nzukọ iji kwalite nhazi nke ndị nkụzi ha, usoro ha gosipụtara, na ihe ndị ọzọ.
Foundation ITIL (site n'aka ụlọ ọrụ kwadoro) US $ 205.00
Foundation ITIL (N'uzo) US $ 226.00
ITIL Ama US $ 750.00
ITIL ọrụ US $ 4500.00
Ahịa maka Iwu ITIL Usoro ma ọ bụ ule nwere ike ịgbanwe na oge.
Ịnye ITIL na ndepụta ozi gị bara uru na ihe omume na ịchọrọ ịtọ ntọala na itinye usoro nlekọta ọrụ nlekọta IT na ala gị na ọrụ ọrụ IT. Ọ bụ mmụba dị mma nke onye ahụ na-ebido. Onye ọkachamara na usoro ITIL na nkwenye na-egosi na ha kpọrọ òkù iji usoro ITIL mee ihe.
ITIL bụ ụkpụrụ dị ike maka ọrụ IT ọ bụla. Site na ihe akaebe a na-enyocha iji mee atụmatụ, ọganihu, nnyefe na nkwado, ọ nwere ike jikọọ ya iji mezuo usoro mmemme ahụ. Ọ nwere ike imeziwanye ọrụ nke ndị nlekọta IT gị, ndị ndụmọdụ, ndị nchịkwa, ndị ọkachamara n'ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ ọ bụla dị otú ahụ site n'inye ha ihu a na-eche ihu iji chịkwaa ahịa nke kacha mma na-enyocha IT.
Mkpebi - ITIL bụ nnukwu ihe ndekọ nke data nchịkwa IT site na nnukwu mkpakọrịta ụwa. Ịnweta usoro ITIL ga-enye ndị ọkachamara IT ọrụ ngwa ngwa na nke a haziri ahazi iji rụọ ọrụ na ịgbaso usoro nhazi IT na usoro kachasị mma.